Ihe ngosi kacha mma nke 11 iji zụta ugbu a na 2021 - Mma
The 11 Celebrity Perfumes iji zụta na 2021
11 Best Celebrity Perfumes Buy 2021
Anyị na-anụ ihe ọhụrụ usoro ejiji na skincare ụdị na-ebupụta oge niile, mana anyị enweghị ike ichefu ụdị ngwaahịa ndị ama ama nke ndị celeb nwere isi: Perfume. Oge mbu 2000 wetara anyi Na-egbukepụ egbukepụ nke Jennifer Lopez, Ọchịchọ nke Britney Spears na ọbụna mbinye aka isi site n'aka Jennifer Aniston — ha nile bụ nnukwu ihe ịga nke ọma n'oge ahụ. Gịnị kpatara ya? Maka, ka echiche na-aga, ebe anyị enweghị ike ibi ndụ nke A-lister, anyị nwere ike ịnụ isi ma ọ dịkarịa ala. Obi dị anyị ụtọ, ihe ndị ahụ e kwuru na mbụ sitere na ụmụ nwanyị na-eduga ụmụ nwanyị na-eduga taa (na ndị dị ka Ariana Grande na Dolly Parton esonyelarị na ọkwa ndị ahụ na-esi isi). N'ebe a, 11 nke ihe ndị na-esi ísì ụtọ kachasị mma nke bara uru na-agbakwunye na ụgbọ ala ahụ, n'ihi ya ị nwere ike ịnye kpakpando gị n'ime.
Njikọ: Ihe ngosi mara mma nke 21 kacha mma maka ntutu gị niile, mkpa anụ ahụ na etemeete
songs na-ege ntị
Kemgbe afọ 2017, Ariana Grande tụpụsịrị ihe nsure ọkụ asatọ - ụfọdụ n’ime ha bụ nke sitere na nnukwu egwu ya. Ma, ọ bụ ísì ígwé ojii bụ ihe na-aga n'ihu maka ọtụtụ ndị Arianators (na ihe karịrị 1,000 + 5-star reviews bụ ihe akaebe). Ga-ahụ ngwakọta nke lavender, vanilla na aki oyibo na-etinye n'ime karama nke yiri ígwé ojii nke ga-adị mma-ịnọdụ ala na akwa uwe gị.
2. Igba ọtọ site Rihanna
Tupu Fenty Mma were oke mmiri were ụwa mara mma, Rihanna bụ ihe na-esi ísì ụtọ. Na ịgba ọtọ na-enye mkpụrụ osisi na ifuru nke doro anya nke onye ọbụ abụ amụrụ na Barbadian wee kpuchie ya. Otu onye nyocha enweghị ike ịja mma maka ịme nke a mbinye aka ya: [M] na-eyi senti a ọtụtụ afọ! Ana m ekele gị mgbe ọ bụla m na-aga! Ogologo oge na [ọ] na-esi isi!
3. Glow nke Jennifer Lopez
Otu n'ime ndị OG na-ewepụta ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ kwa afọ, Glow Jennifer Lopez anọwo ogologo oge ka ewere ya dị ka kpochapụwo. (FYI, ọ bịara n’afọ 2002.) A na - eji mmanụ vanilla wee metụta mkpụrụ osisi citrus na mkpụrụ osisi na - esi isi ọma. Naanị otu spritz ga-ebugharị gị na mmalite oge gboo, yabụ anyị nwere olile anya na ị nwere nke gị obere jeans dị njikere.
Zụta ya ($ 25)
4. Curchọ ịmata ihe nke Britney Spears
Britney Spears nwere ihe karịrị 30 (ee, 30!) na-esi ísì ụtọ nye aha ya mana Curious bụ nke na-apụ apụ na ndị ọzọ. Sì ọkụ (nke bụ jasmine, vanilla na musk pear) dị mma maka ejiji kwa ụbọchị. Na ihe karịrị 2,000+ 5-star reviews, otu ahịa na-ahọrọ nke a karịa ya okomoko isi: M fọrọ nke nta ka 40 afọ na n'ihi ihe ụfọdụ, a akpan akpan senti naanị agbaze m n'ime a ndoro mmiri na uro. Ana m ejikarị isi ọma dị ka Jo Malone na Cartier. Ma mgbe m rutere ọrụ na-eyi a senti, M n'ezie na-enweta otito na otú ihe ọma m na-esi isi. Ọ dị n’elu isi ise kachasị amasị m maka ndụ.
5. Fame site Lady Gaga
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ isi isi Lady gaga 'S 2012 Fame album, lee anya karia isisi site na otu aha. Spritz ya na ị ga-ekpuchi na ụtọ, musky mix nke mmanụ a honeyụ, aprịkọt na ifuru ndetu. Na mgbakwunye, anyị enweghị ike ichefu ịkọwa etu oke egwu ọla edo a na-ahụ anya si dị ịtụnanya, ọkachasị ebe ezigbo isi ahụ dị n'ime bụ oji; FYI Gaga kọwara senti a dị ka mkpụrụ obi ama.
6. White Diamonds nke Elizabeth Taylor dere
Na ihe karịrị 9,600 + nyocha, nke a bụ ihe na-esi ísì ụtọ nke Elizabeth Taylor. Formulakpụrụ a na-adịgide adịgide na-egosipụta ụdị osisi floral nke ogige, lili na Narcisse. Ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịkwado gị, ma eleghị anya onye nyocha a nwere ike: Anọ m na-eyi White Diamond maka ihe karịrị afọ 20 ... ekwesịrị m ikwu ihe ọzọ…
top 10 ihunanya fim Hollywood
7. Ọmarịcha site Sarah Jessica Parker
Anyị na-asọpụrụ ejiji Sarah Jessica Parker na nchịkọta akpụkpọ ụkwụ ya-ya mere ọ bụ naanị ihe ezi uche dị na ya na-esi ísì ụtọ na-ejide ya. Enwere ike ịchọta ngwakọta nke citruses (aka bergamot na nectarine), rosewood na lavender ndetu na karama pink a. Ọ nwere ngwụcha nro na nke dị nro nke dị mma maka oge ọ bụla.
8. Nwanyị na-egbu egbu site n'aka Katy Perry
Channel gị nwaanyị dị n'ime ya na senti nke na-enweghị oke ma ọ na-abịa na karama na-ada ada ọmarịcha ọmarịcha. My all-oge ọkacha mmasị senti! Enwere m imi dị nro mgbe ọ na-esi ísì ụtọ, mana nke a na-eju anya! Ana m ekele gị mgbe niile. Ruo ugbu a, nke a bụ karama nke atọ m! Ahụrụ m ịhụnanya n'anya, hụrụ ya n'anya! ka otu onye nyocha kwuru. You ga-ahụ ihe ngosi nke mkpụrụ osisi gbara ọchịchịrị, piom na bergamot tinyere ihe ndetu ntọala dị ka patchouli na cashmere (yabụ atụla anya ifuru ọ bụla ebe a).
9. KKW X KRIS by Kim Kardashian
A maara ndị Kardashians maka njikọta ezinụlọ ha ma isi nwanyị a na-esi isi ọma dabara na ụgwọ ahụ. Kim Kardashian na momager Kris Jenner kere senti KKW X KRIS na osisi (aka cashmere na amba) na mkpịsị na-acha ọcha na-acha ọcha nke na-ahapụ ihe ọhụrụ ma dị ụtọ. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-achọ onyinye maka mama (ma ọ bụ naanị chọrọ ihe na-echetara a Michael Kors mbinye aka senti ma ọ bụ Gucci oge ntoju dupe), tụlee nhọrọ a na-adịte aka.
10. Jennifer Aniston nke Jennifer Aniston dere
Yup, Jennifer Aniston nwere ya eponymous senti. Ihe na-esi ísì ụtọ dị mma maka abalị ma ọ bụ ụbọchị ịhụnanya na beau gị ma otu onye nyocha nwere ike ịgba akaebe na nke a, nke a bụ ihe nsure ọkụ kachasị amasị m. Ana m enweta ọtụtụ otuto mgbe m na-eyi ya. Ọ bụ nnukwu nwanyị isi ntakịrị gafere. Ihe ngosi ọkụ na-emekwa ka ọ dị mfe ịga maka ihu igwe ọkụ.
11. Esi ísì ụtọ sitere n’elu site Dolly Parton
Dolly Parton abanyela n'ụgbọ okporo ígwè na-esi ísì ụtọ na mbido mbụ ya bụ karama nke na-esi ísì ụtọ nke dị n'elu. Chee nkpuru osisi na nkpuru osisi (dị ka Jasmine, vanilla, mandarin na osisi amba, ịkpọtụ aha ole na ole) nke ahụ na-echetara anyị Dollywood. Obi dị m ụtọ, a ga-enwe ụdị zuru ezu na July, yabụ anyị nwere ike spritz na ịhapụ maka oge ezumike niile.
Njikọ: Afọ iri na asatọ kachasị mma maka ụmụ nwanyị, dịka ụmụ nwanyị hụrụ ha n’anya
n'elu maka jeans ọcha
ụzọ kachasị mma iji gbochie ntutu isi
ezi edozi isi maka ihu oval
achicha ubochi omumu ubochi
kacha mma omimi fim mgbe
Etu esi agwo oria isi